Ogaden News Agency (ONA) – Barack Obama oo Masjid Maraykanka Kuyaala Booqday.
Barack Obama oo Masjid Maraykanka Kuyaala Booqday.
Posted by Dayr	/ February 5, 2016
Barack Obama, Madaxweynaha Maraykanka ayaa Arbacadii markii ugu horeysay tan iyo intuu xilka uu qabtay booqday Masjid ku yaala gudaha Maraykanka.
Obama ayaa booqashada kutagay Masjid ku dhexyaal xarunta wayn ee Islamic Society oo ku taala magaalada Baltimore, xaruntaasi muslimiinta ayaa waxaa ku yaala masjid wayn iyo iskuulo ay dhigtaan ardayda muslimiinta.
Barack Obama ayaa intuu goobtaasi booqanayey la kulmay xubno ka socda Jaaliyada Muslimka Maraykanka ooy ku jireen mutacalimiin, ganacsato iyo waliba ciyaaryahano. Dadka uu la kulmay Obama ayaa waxaa kamid ah gabadh ciyaaryahan ah oo kamid noqon doonta Kooxda Maraykanka uga qayb galaya ciyaaraha Olympicada ee sanadkan ka dhici doona magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil.
Gabadhan muslimada ah ayaa noqon doonta ciyaartoygii ugu horeeyey oo muslim ah oo iyadoo Xijaaban ka qeyb qaadata ciyaaraha Olympic.
“ Marar badan bay dhacday in Muslimiinta la weeraro ama lagu eedeeyo falal ay gaysteen kooxo faro ku tiris ah ” ayuu yidhi Obama oo intaasi ku daray in hadalada kasoo baxaya siyaasiyiinta Maraykanka qaarkood ee lidka ku ah muslimiinta ay tahay wax aan loo dulqaadan karin oon dhaqan u ahayn shacabka iyo dalka Maraykanka. “ Hadii hal diin la weeraro, waxay lamid tahay iyadoo la weeraray dhamaan diimaha oo dhan ” ayuu raaciyay Obama.
Ma’aha markii ugu horaysay oo uu Obama masjid booqdo balse wakhtigii ugu horaysay markuu xilka qabtay sanadkii 2009 ayuu mar booqday Masjidka ku yaala magaalada Qaahira mar uu dalka Masar safar ku tagay, balse waa markii ugu horaysay oo uu Obama booqdo Masjid ku yaala gudaha wadanka uu ka taliyo ee Maraykanka.
Booqashada Obama ee Masjidka ayaa waxaa si wayn u cambaareeyey kooxaha xagjirka ah ee taageera xisbiga Mucaaridka ah ee Jamhuuriga (The Republican Party).